Duufaanta kuleylaha ah Elsa waxay Jamaica uga tagaysaa $ 803 milyan oo magdhow ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Duufaanta kuleylaha ah Elsa waxay Jamaica uga tagaysaa $ 803 milyan oo magdhow ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Duufaanta Kulaylka Elsa
Raiisel Wasaaraha Jamaica Mudane. Andrew Holness ayaa shalay u sheegay aqalka wakiilada in roobab culus oo ka dhashay duufaanta Elsa awgeed, lagu qiyaasay in khasaaruhu ku dhow yahay $ 803 milyan.
Qiimeyntan hordhaca ah waxaa sameysay Wakaaladda Hawlaha Qaranka (NWA).
Qiimeyntu waxay muujineysaa in qiyaastii 177 waddo oo jasiirad ballaaran ah ay saameysay duufaantii kulaylaha Elsa.
Qalabka NWA waxaa loo isticmaali doonaa in lagu nadiifiyo wadiiqooyinka ay dhibaatadu saameysey iyadoo lala kaashanayo qandaraaslayaal gaar loo leeyahay.
PM Holness wuxuu ku booriyay xubnaha Aqalka Hoose inay si dhakhso leh ugu dhaqaaqaan caawinta NWA si loo dhamaystiro wajiga koowaad ee barnaamijkeeda yareynta. Wuxuu ku wargaliyay in dowladda ay diyaarisay $ 100 milyan oo ujeedkan ah.
“Waan ka warqabaa in barnaamijka lagu soo gabagabeeyay meelaha qaar, laakiin waxaa jira kuwa kale oo dib u dhac ku yimid. Waxaan rabaa inaan ku boorriyo dhamaanteen inaan dhameystirno howlahan 21-ka maalmood ee soo socda, si aan ugu sii wanaagsanaano inta ka harsan xilligan, ”ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha.
“Qiyaasta waxyeelada daadadka waa mid horu dhac ah, maaddaama duufaantii ay dhammaatay Axaddii, wakaaladduna ay sii wadayso qiimeynta burburka si loo ogaado qiimaha dayactirka joogtada ah. Qiimeynta, ilaa maanta, waxay u qaybsan tahay laba qaybood - kharashka nadiifinta iyo nadiifinta jidadka iyo bulaacada qashinka iyo qashinka iyo kharashka si wadooyinku u noqdaan kuwo la heli karo.
“Marka la eego kharashka lagu nadiifinayo laguna nadiifinayo waddooyinka iyo qashin-qubka dhoobada iyo qashinka, kharashka hordhaca ah waxaa la dhigay $ 443 milyan. $ 360 milyan oo kale ayaa loo baahan doonaa si looga dhigo marinnada ay dhibaatadu saameysey la heli karo. Waxaan haddaba, eegaynaa wadarta kharashka ku dhowaad $ 803 milyan. ”
PM Holness ayaa sharraxay in qarashka lagu qiyaasay ay sabab u tahay Duufaanta Kulaylka Elsa waxay ku saleysan yihiin waqtiga qalabka iyadoo la isticmaalayo sicirka caadiga ah iyo agabka loogu talagalay buuxinta meelaha la dhaqay. Wuxuu xusay in kharashaadkani ay daboolayaan nadiifinta waddooyinka, nadiifinta bullaacadaha, abuuritaanka marin iyo balastar, isagoo intaa ku daray in wax kharash ah oo baxnaanin iyo dayactir joogto ah aysan ku jirin. Wuxuu sheegay in NWA ay sii wadi doonto qiimeynta burburka si loogu daro kormeerka dhamaan dhismayaasha meelaha roobabku ugu badnaa. Raiisel wasaaraha ayaa intaas ku daray:
“Waa inaan tilmaamaa in kharashka nadiifinta iyo nadiifinta jidadka iyo bulaacada qashin iyo qashinku diiradda saarayo ka qaadista caqabadaha jireed ee jidadka iyo helitaanka marin u helitaanka bulshada. Intan badan ayaa la qabtay. Kharashka si jidadka looga dhigo kuwo la heli karo, si kastaba ha noqotee, wuxuu ka hadlayaa buuxinta godadka, qiimeynta iyo adeegsiga shingles iyo isugeynta ugu yar ee lagu hagaajinayo qulqulka waddooyinka. Waxaan rajeyneynaa in howshan lagu qaban doono labada toddobaad ee soo socda.
“Tani waa mid muhiim ah, maadaama aan dooneyno inaan hubinno in wax saameyn ah oo nolosha dadka saameyn weyn ku yeelan kara aan laga fiirsan. Qiimeyn ayaa sidoo kale lagu sameynayaa baahida dhaqan celinta, taasoo ka dhalatay burburka ku yimid isku xidhka wadada iyo nidaamka bullaacadaha. ”
Qaar ka mid ah waddooyinka ay dhibaatadu saameysey waxaa ka mid ah Alexandria ilaa Greenock Bridge, White River ilaa St. Ann’s Bay, Hopewell ilaa Ocho Rios iyo St Ann’s Bay ilaa Green Park, oo ku taal St. Ann; Broadgate ilaa Toms River, Trinity ilaa Fontabelle, Strawberry Fields ilaa Orange Hill, iyo Port Maria ilaa Islington, oo ku taal St. Mary; iyo Chipshall ilaa Durham, Hope Bay ilaa Chipshall, Dooxada Seaman ilaa Mill Bank, iyo Kaniisada Alligator ilaa Bellevue, ee Portland.
Sidoo kale waxaa saameeyay Morant Bay ilaa Port Morant, Port Morant ilaa Pleasant Hill, Pleasant Hill ilaa Hectors River, Bath to Barretts Gap, Bath to Hordley, Bath to Bath Fountain, Morant River Bridge to Potosi, in St. Thomas; iyo Isbaanish Town ilaa Bog Walk, Dyke Road to Highway 2000, Twickenham Park to Old Harbor roundabout via Burke Road, Spanish Town to Bamboo, Old Harbor Bay area to Bartons, Twickenham Park to Ferry, Naggo Head to Dawkins and Old Harbor roundabout to Gutters gudaha St. Catherine.
eTurboNews la hadlay Dalxiiska Jamaica Wasiirka Mudane. Edmund Bartlett oo yiri, “Inta badan waxaa nalaga badbaadiyay suurtagalnimada xitaa waxyeello weyn oo soo gaarta guryaha iyo dhismayaasha. Caadi ahaan, roobabkii mahiigaanka ahaa waxay geysteen khasaaro taasina waxay saameyn ku yeelatay waddooyinkeenna. ”